Ahoana ny fomba fanaovana bileta: ny lakilen'ny fanatanterahana azy | Famoronana an-tserasera
Alao an-tsaina hoe mamakivaky faritra iray ianao, na an-tongotra na amin'ny fiara, dia mijery takelaka fisoratana anarana ianao. Raha tsara izany, ny zavatra mahazatra dia ny voatanisa ao amin'ny retinao, ary rehefa tonga any amin'ny toerana halehanao ianao dia miresaha izany amin'ny mpiara-miasa na namana na mpianakavy. Amin'ny sehatra fandraharahana, ilaina ny fananana olona manao afisy tsara ho anao. Fa ahoana no anaovanao ireo takelaka fisarihana izay manintona ny mpividy (ankehitriny sy ho avy)?
Raha te hahalala ny lakilen'ny fomba fanaovana bileta mahomby Ho an'ny orinasanao, na ho an'ny mpanjifanao, eto dia manome anao ny lakilen'ny fanatanterahana izany. Amin'ny antsipiriany kely dia hahafahanao gaga sy hisarika ny sain'ny hafa. Ary tsy mila fotoana na ezaka be araka ny eritreretinao izany.
2 Fomba fanamboarana takelaka manintona ny saina
2.1 Lohateny manaitra
2.2 Ny haben'ny takelaka fanaovana takelaka
2.3 Endritsoratra mety
2.4 Vola manintona, loharano miasa majika
2.5 Drafitra loko
2.6 Adinoy ny 'normal'
2.7 Mitady hiteraka fiatraikany
Afisy dokambarotra, antsoina koa hoe afisy ara-barotra, dia a fitaovana ampiasaina amin'ny dokam-barotra hahatratra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ilay sary. Ireo, tamin'ny voalohany, dia ara-batana fotsiny, izany hoe natao sora-baventy ary napetaka teny amin'ny arabe, na amin'ny toerana malalaka, na amin'ny kely. Ohatra, ireo afisy manambara première film, na ireo izay mihantona amin'ny jiro am-baravarana manambara hetsika.
Saingy, androany dia azo atao an-tserasera ihany koa ireo takelaka fanaovana takelaka ireo. Angamba ny ohatra mazava indrindra ho anao dia ny dokam-barotra. Rehefa mizaha ny Facebook, Instagram na tranokala sasany ianao dia hitanao fa misy "doka", maro amin'izy ireo no hita maso. Ireo dia azo raisina ho toy ny afisy.
Raha ny tena izy, ny afisy dokam-barotra dia miresaka bebe kokoa amin'ireo napetraka ivelan'ny Internet, izany hoe ivelan'ny Internet. Saingy tsy voatery ho eo.
Fomba fanamboarana takelaka manintona ny saina
Rehefa dinihina fa saika tsy voamarika ireo afisin'ny dokam-barotra tato ho ato, ny zavatra ilainao dia zavatra izay rehefa tena hitanao dia mila mijery indray ianao mahita azy. Ary ho an'izay, zava-dehibe ny famoronana, ny maha-izy azy ary io teboka lamaody io. Fa ahoana no ahazoanao izany rehetra izany?
Eto izahay dia manome anao ireo hevi-dehibe tsy maintsy hatrehinao.
Alao an-tsaina izany sary izany, izay nanoratana tamina taratasy lehibe, firaisana ara-nofo malalaka. Raha ny tena izy dia io no nahasarika ny sain'ny afisy, fa tsy ny fanaovana dokam-barotra.
Rehefa nijanona hamaky ny pirinty kely etsy ambony sy ambanin'ireto teny roa ireto ianao dia nahatsapa fa misy dikany hafa tanteraka izany. Na izany aza, nahasarika ny sain'ny maro io lohateny manaitra io.
Ary izany no angatahinay aminao. Mila mahita fehezan-teny, teny filamatra, teny iray matanjaka ampy hanakanana ny olona ianao hahita izay voalaza ao. Eny, fantatray fa ity no ampahany sarotra indrindra amin'ny fanaovana fanaovana takelaka, saingy tsy azo atao izany. Raha efa nisy olona nahavita nanao an'izany, maninona raha mba olona manao izany koa?
Ny haben'ny takelaka fanaovana takelaka
Saika miaraka amin'ny hafatra sy izay tianao aseho amin'ny olona, ​​ny haben'ny afisy dia zava-dehibe ho raisina. Misy karazany maro, lehibe kokoa, bitika kokoa, tontolony, mitsangana ... Izay rehetra tsy maintsy raisinao alohan'ny hanombohanao manangona ny endrika, satria raha manova ny endrika ianao dia milatsaka daholo ny asa nataonao.
Raha fantatrao fa hametraka ny afisy ny mpanjifa amin'ny faritra fitaterana dia matetika ny refy dia A1 na B2, ary noho izany ny famolavolana anao dia tsy maintsy foronina eo ambanin'ireny. Raha ho an'ny varavarankely fivarotana izy ireo na ho an'ny atitany dia mihoatra ny ampy ny A4.
Ary ankehitriny, ahoana raha any amin'ny habakabaka lehibe kokoa io? Miloka amin'ny B1 na A0.
Miankina amin'ny mpihaino kendrenao dia tokony hampiasa typeface iray na iray hafa. Araky ny fantatrao, manampy anao ny endritsoratra, tsy handao fotsiny ny hafatra an-tsoratra, fa koa mba hampitana fahatsapana.
Noho izany, raha tsy azonao antoka izay hampiasaina, manomboha manandrana ary ataovy ao anaty kirarin'izay mahita ny afisy. Ho tsapanao ve ny tian'ny marika hampitaina? Angamba ho tsara kokoa amin'ny karazana endritsoratra hafa io?
Vola manintona, loharano miasa majika
Indraindray ny fametrahana sary sy ny fametrahana lahatsoratra dia tsy ampy hahasarika ny sain'ny olona. Mifidy kokoa izy ireo izao ary zara raha mandany fotoana mijery zavatra. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia ny segondra dia manome ny sary tsirairay isaky ny 3 segondra. Raha misarika ny sain'io olona io ianao dia hijanona ela kokoa izy ireo, raha tsy izany dia handalo izy ireo ary hanadino.
Ary satria tsy izany no tadiavinao amin'ny afisy dokam-barotra, loharanom-pahalalana iray izay ampiasaina bebe kokoa dia ny mamorona background mahaliana. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe tsy maintsy mamorona afisy amin'ny orinasan-pisakafoanana ianao. Ary nomeny anao ny sarin'ny dobo filomanosana.
Ahoana raha mamorona ny halalin'ny sary ianao ary toa mamela anao hidina ao anaty pisinina ilay afisy? Tsy misy isalasalana fa manaitra izany satria raha ny masonao dia mahita sary ianao, saingy ity iray ity dia 'hanadalana' anao hieritreritra fa manana volavola, refy telo ary telo izany, tena afaka miditra ao ianao.
Amin'ny alàlan'ny drafitra loko dia miresaka momba ny fananana isika ho fototry ny lokon'ny orinasa mihitsy, na zavatra misolo tena azy. Ataonao izany satria mila ny mpampiasa mahita an'io sary io ianao hampifandray ireo takelaka misy marika.
Ohatra, alaivo an-tsaina hoe nijanona tsy nampiasa ny lokony mena teo amin'ny afisy i Coca-Cola ary nivadika mavo. Azonao fantarina ve io amin'ny marika fotsiny satria niantso anao hoe Coca-Cola? Ny zavatra azo inoana indrindra dia ny hisarika ny sainao, ny eritreritrao hamoaka vokatra iray izy ireo, saingy amin'ny lafiny hafa, amin'ny farany dia tsy hiraharaha izany ianao.
Adinoy ny 'normal'
Amin'izao fotoana izao, mba hahitan'ny olona ny takelaka fanaovana takelaka dia mila mamorona zavatra tsy hitany ianao, na miteraka fahatsapana toy izany ka tsy azon'izy ireo hadinoina.
Tsy mora izany, efa nilaza taminay izahay. SAINGY tsy maintsy milalao ireo teny, andianteny ary sary ianao mba hamoronana collage. Aza adino ny mametraka ny zava-drehetra amin'ny toerany ary somary sahy. Mazava ho azy fa miankina amin'ny mpihaino kendrenao ianao, ary koa ny toerana hametrahana ny afisy, raha amin'ny Internet (toerana ahafahanao mandika lalàna kokoa) na ara-batana, izay ahafahanao mandeha somary lavitra amin'ny fomba mahazatra.
Mitady hiteraka fiatraikany
Ny tena tanjonao rehefa mamorona takelaka dia asaivo mijanona amin'ilay sary ao an-tsainy ireo mpampiasa, izy ireo mitady vaovao misimisy momba ny zavatra ambaranao sy ny fifandraisan'izy ireo. Raha mahomby ianao dia hahomby.
Tsy mora ny mianatra mamorona takelaka mahomby nefa tsy azo atao izany. Mila mifandray amin'ny orinasa sy ny besinimaro fotsiny ianao hahafantarana izay tadiaviny sy ny fomba hisarihana ny sain'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fomba fanamboarana takelaka